Ogeysiis ee macruufka 9 shirka Apple ee Developer Worldwide ee San Francisco ayaa keentay xiisaha ka mid ah taageerayaasha Apple. Iyadoo Apple ayaa ku dhawaaqay qaababka aadka loogu baahan yahay iyo xiiso leh qaar ka mid ah in qalabka cusub iyo yabooh software si ay u bixiyaan, mid ka mid ah in uu ahaa oo ahaa nolosha batari dheer aaladaha Apple. Inta aanan u guda on sida macruufka 9 waxaa sii socotay inay u sameeyaan, aynu ka fiirsan su'aal aad u muhiim ah.
Maxay dadka dan batari dheeraad ah?
Waayo, mid, waxay ku caawisaa welwelina gelinaya ay telefoonka ama aalad si ay u qaadaan mar kasta in muddo ah ama walwalo batari dheecaan markii ciyaaro kulan ay jecel yihiin.
Technology waxaa dhakhso ayuu isu beddelayaa maanta adduunka casriga ah, ka fiirso in 512 MB RAM waxaa loo tixgeliyaa 'ku filan xataa shantii sanno ee dib - maanta, aad telefoonada la 4 Giga bytes ee RAM ka soo baxay oo aad rabto in aad doonto telefoonada si aad u dhaqso. Processor hawlaha degdegga ah iyo ciidan dhan codsiyada cusub ayaa habka aan ula falgalaan hindisooyinkayaga bedelay. Processor Fast, qaab qeexitaanka sare, iyo inta sida ba'an ee lagu kaydiyo ay hindiseen - in ay sii waxan oo dhan ka socda, waxaa jira wax yar oo loo yaqaan 'batari', il awoodeed ee telefoonka ah.
Waxa intaa dheer in dhammaan sifooyinka weyn, waxaad had iyo jeer raadiyo batari awood qalab ah - telefoonada badan oo xoog ku imanaysa 3,000 Mah ama ka badan oo maanta. Apps u baahan tahay il awood joogto ah, oo aadan rabin in aad batteriga inuu dhameysto casiir, gaar ahaan inta aad ku go ama ka shaqeeya wax aad muhiim u ah. Camera aad telefoonka ee, barnaamijyadooda ciyaaraha aad ku ciyaari lahayd, waqtiga aad ku bixiso Whatsapp iyo Facebook, xiriirka walba ilaa sheekada in nolosha batari xoog badan oo ah casriga ah waa muhiim. Tani waa weyn ee sababta, Waxaan oo dhan iyo dadka kale ee casriga ah ee daryeelka dunida ku batari dheeraad ah.
Sidee macruufka 9 hagaajin doonaa nolosha batteriga?
Layaab ku filan, taasi waa mid ka mid feature oo ka mid ah arrimo cusub ee abuurtay in 9 Apple aysan si fiican ee WWDC ee sannadkan. macruufka 9 muuqataa si loo horumariyo nolosha batteriga qalabka ay ugu yaraan 1 saac, iyo ilaa 3 saacadood marka 'Low Power' ah hab waa karti. Ugu dambeyntii, Apple ayaa la timaado wax la weydiiyay isticmaala iPhone iyo iPad hadda kasta oo markaas. The 'Low Power' sameeya xaddido isticmaalka qalabka Apple ilaa xad, laakiin astaamaha asaasiga ah samayn shaqeeyaan si la mid ah sida caadiga ah. Tusaale ahaan, in habka awood u yar, aad e-mail soo aroori jirey ee telefoonka noqon doonaa si toos ah u wareegeen buugga, app asalka downloads la naafo doonaa, oo dhalaalka, xawaaraha network iyo dhaqdhaqaaq ee qalabka waa la dhimi doonaa. Waxaa lagu magacaabi karo mid ah qurbaannada in ay ka hor la sameeyo Samsung iyo HTC, laakiin tani ma aha mid aad u fog xad dhaaf ah sida laba dambe tago.
Aragti ah sida wax ka shaqeyneysey ilaa hadda waxaa lagu arki karaa iyagoo eegaya tirada batariga ee macruufka 8. Iyadoo macruufka 8, batteriga of 6 iPhone ah soconaysaa ilaa 14 saacadood ee 3G markii hadal, 11 saacadood ee Wi-Fi , 11 saacadood HD video loo maqli karo iyo 50 saacadood loo maqli music. Iyada oo macruufka 9, waxaa la soo saaro kartaa barkin dheeraad ah 3-saac, inkastoo saraakiil ka Apple aan cayimay saxda ah ee 3 saacadood in ay u jeeday. Waxaan u heli doonaa dhakhsaha badan macruufka 9 Isbahysiga baxay.
Apple, in ay sii daayo rasmi ah oo ku saabsan arrimo 9, ayaa sheegay in website-keeda in:
"Guud ahaan nidaamka qalliinka oo dhan, barnaamijyadooda iyo farsamooyinka muhiimka ah ee lagu sameeyey wax ku ool ah si ay u jar isticmaalka batari meel kasta oo suurtagal ah - si aad u hesho nolol batari dheeraad ah, waayo, waxyaalaha aad maalin walba samayn. Thanks to daarmayaay'e dareemayaal light oo u dhow, aad iPhone ogyahay haddii ay fool-ka hoos miiska iyo ka hortagtaa in shaashadda ka soo jeestay oo ku saabsan, xitaa marka aad hesho ogeysiin ah. Oo hab cusub Power Low kuu ogolaanaysaa inaad kordhiso sii noloshaada batteriga. "
Apple oo aan siin wax faahfaahin ah sida kordhinta ah batari ayaa waxaa suurtageliyey, laakiin mid ka mid ah sababta oo ah tani waxaa sabab u ah isticmaalka dareemayaal. Waa qaab ay isticmaalaan Apple soo socda khadadka Android M. macruufka 9 isticmaalaa light daarmayaay'e iyo dareemayaal dhawaanshaha ah qalab aad, tusaale ahaan, ma ifi shaashadda telefoonka ku ogeysiin ah, haddii telefoonka waa la wajiga hayaa.
Waxa ay noqon doonaan mid waxtar leh?
Sannad kasta, Apple soo baxa wax ka dhigaya qof walba noqon jallo ay ku qoran. Sannadkan, dhalashada ee macruufka 9 ayaa sidoo kale la filayaa in aay dadku dareensanyihiin in ay wada joogaan. The 'Low Battery' feature nidaamka waxaa hubaal ay noqon boon ah ee isticmaala Apple, iyadoo ay jirto marar badan jiray cabashooyin ku saabsan baytariyada iPhone helo lagaga miiro meesha ka baxay aad si deg deg ah. Waxaa intaa dheer, iyadoo la isticmaalayo wanaajiyey oo ka mid ah dareemayaal qalabka, macruufka 9 ballan qaaday in ay siin waayo-aragnimo ah sida marna ka hor. Si kastaba ha ahaatee, weli weli la ogeyn sida ay u xaalkoodu doonaa in suuqa, kaas oo noqon doona cad ay quarter-maaliyadeedka soo socda ama si.
> Resource > macruufka > macruufka 9: Life Battery waa la kordhinayaa?